Editor's Notes » အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း – သြဂုတ်လ ၂၀၁၅	6
@QUIL@ says: ရွာထဲ .. Cj Card မလိုတော့ဘူး သဂျီး…
(Cf) Copier of Facebook Lolzzzzzz
မင်း ခန့် ကျော် says: ဤသို့ နိုင်ငံရေးဘယ်ညာ၂ဖက်ခွဲကာ နိုင်ငံရေးမျှော်မှန်းချက်၊ လက်စွဲမူထားလျှက် ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြခြင်းအားဖြင့် အပြန်အလှန်အတိုက်အခံပြုကြလျှက် လူထုကိုလည်း ၂ပိုင်းကွဲအောင် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ပညာပေးစည်းရုံး လမ်းပြဆောင်နိုင်ပါလျှင် တိုင်းပြည်ကြီး တဟုန်ထိုးတိုးတက်သွားမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကား ၃လကျော်သာလိုတော့သည်၊
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဂဠုန်ပြာ ရှီမရှိတော့ မသိဘူး 8888 အရေးအခင်းကာလမှာတော့ ဂဠုန်နီ ဆိုတဲ့ အဖွဲအစည့် တစ်ခု မန်းလေးမြို့ကို ထိန်းသိမ်းသွားဘူးတယ်
kai says: Watchadrop or mercury wrap itself up in some gold foil and dissolve it. Now you know why prospectors used mercury to purify gold.
မြစပဲရိုး says: ဟုတ်တာပေါ့ သူကြီး မင်း ရယ်။ အနောက်တိုင်း ဒီမိုကရေစီ အသားကျပြီး နိုင်ငံတွေ မှာပေါ့။
မကြာခင် လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မ ကတော့ လက်ရှိအနေအထား အရ မူဝါဒ တွေ၊ ပေါ်လစီ တွေ ထက် “လူ” တွေ က ပိုပြီး အရေးကြီး နေသလားလို့။
မြစပဲရိုး says: ဂဠုန် ဆိုလို့ ရွာထဲ က garuda ကို တောင် သတိရနေမိတယ်။